Raashiyaan misaa'ela akka ijaartu akeekkachiisan-Puutiin - Oromia Broadcasting Network - OBN
Waligaltee 'Cold War' cabsuun Ameerikaan misaa'ela ni ijaarti taanaan, Raashiyaanis akka ijaartu Pireesdaant Vilaadmir Puutin akeekkachiise.
Ibsi kun kan ba’e Kibxata Raashiyaan waligaltee Humnoota Nukileera Fageenya- gidduugaleessaa (INF) diigdetti jechuun himannaa dhaabbanni ‘Nato’ dhiyeesseen booda.
Bara 1987tti Ameerikaafi USSR gidduutti waliigalteen mallatteeffame kun biyyoonni lamaan misaa’eloota fageenya dhiyoofi gidduugaleessa akka hin fayyadamne kan dhorku dha.
Pireezidaant Puutin himannaan kun Ameerikaan waliigaltee dhiisuu akka yaaddu agarsiisa jedha.
Pireezidaantiin Raashiyaa waliigaltee INF irrattii meeshaalee waraanaa dhorkaman ijaaraniiru jechuun ibsa televizhiiniin darbe irratti dubbateera.
“Amma waayilli keenya Ameerikaan haalooti waan geddarameef meeshaa akkasii qabachuu qabna jedhani kan amanan fakkaata,” jedhe.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaan dura sababa gocha Raashiyaatiin biyyittiin waliigaltee kana ni dhiifti jedhee dubbateera.
Kibxata gurmiin waraanaa Biyyooti Lixaa (NATO) seeraan Raashiyaan waliigaltee digdeetti jechuun himateera.
“Raashiyaan misaa’eela ijaartee qopheeffataa akka jirtu beekameera, meshaan 9M729 waliigaltee INF can cabsuufi eegumsaa biyyoota ‘Euro-Atlantic’ keessa jiraniif sodaachiisaa kan ta’edha,” jedha ibsi Nato.
Raashiyaan waliigaltee ‘Cold War’ akka hin diigne irra daddeebiin haalteetti.Maddi:-BBC
Total Hits : 76429